Ihe dị iche iche dị na Solar Beginner Checklist ihe maka obere ihe nrịbama - Kimroy Bailey Group
Mgbe m malitere azụmahịa ntinye nke anyanwụ m na Kimroy Bailey Renewables ọ dị m ka ya bụrụ na m nwere ndepụta nke ihe ndị kwesịrị ịdị n'ọnọdụ iji bido n'ụkwụ aka nri. Edere m edemede a ma mepụta Nzọụkwụ site na Nzọụkwụ Mbara Igwe iji nyere ndị obere anyanwụ aka ka ịmalite na ụkwụ aka nri. Enwere ihe atọ ndị mbụ bidoro inyocha anyanwụ ga-enwerịrị, ebe ndị a bụ ọzụzụ kwesịrị ekwesị, ezigbo ngwaọrụ na obere otu.
Jide n'aka igosi ndị ọbịa na barbeque gị usoro mbara igwe gị
Nyocha Solar nke Mpempe akwụkwọ # 1: Ọzụzụ Ziri Ezi maka Mbara Anyanwụ Installer
Mgbe anyị mepụtara usoro ntanetị anyị Bykwụ na Bykwụ Solar Echichi, anyị chọrọ ịnye vidiyo ọzụzụ ahaziri maka anyanwụ n'otu ebe. Uru nziwanye Soro Ntinye Mbara Igwe nziputa a kapughara- wepu anyi usoro ule na njehie di oke onu ma gbasie ososo ihe egwuregwu obi ike na itinye usoro ike anwuru oku. Ọzụzụ na-enye gị ohere ịchekwa na ego na oge, ọ na - eme ka arụmọrụ gị na aha ọma gị dịkwuo mma.
Ọzụzụ na mpaghara dịka ụkpụrụ nchekwa, sistemụ anyanwụ ma na -eme ka nhazi ya, ndị ahịa na nleta saịtị nwere ike ime ka ị pụọ iche n'ọma ahịa. Iji maa atụ, youmaara na iyi ihe ọla ndị dị n’elu ahụ gị, dịka mgbaaka ma ọ bụ ụdọ mgbe ị na-etinye ma ọ bụ jidesie batrị nchekwa bụ ihe amachibidoro. Kedu ihe ọghọm ị nwere ike ịjụ? Otu ọkụ nke si na ọdụ batrị na-ejikọta jewelery dị ka ị nweta mkpanaka ịgbado ọkụ na itinye ya n'ọrụ ịchọ mma gị.
Mbara Igwe Mbara Anyanwụ # 2: Ngwaọrụ Mbara Igwe iji wụnye sistemu nke anyanwụ zuru ezu
Mgbe m bidoro itinye igwe nrụnye anyanwụ na-enweghị akụrụngwa dị mma, ntinye nke ụbọchị 3 ghọrọ ngwa ọrụ izu 1. Nke a butere ego ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ maka ndị ọrụ, ugboro abụọ ka ha na-eme njem, yabụ ọnụahịa enweghị enweghị ngwaọrụ anyanwụ dị mma malitere ịgbakwunye ngwa ngwa. Nzọụkwụ Anyị Site na Nzọụkwụ Mbara Igwe Solar Installation, anyị na-akuziri gị ngwaọrụ na akụrụngwa ga-eme ka nrụnye gị nke ukwuu karịa! Ndị a bụ ngwaọrụ ị ga-eji eme mgbe niile na ọ bụrụ na ọ bụghị ọrụ ọrụ anyanwụ niile. Dịka ọmụmaatụ, ịmara etu esi atụgharị data site na akụrụngwa dị ka Hydrometer, nke a na-eji nwalee ọnọdụ batrị gị, bụ ihe enyemaka ga-enyere gị aka inweta ọzụzụ. Ahịrị ike dị mkpa mgbe ị na-emeso ụlọ ihe siri ike, ebe nchekwa nchekwa. dị mkpa mgbe ị na-arụ nrụpụta n’elu ụlọ.
Pịa ịzọrọ nkwụghachi nke 54% gị site na nzọụkwụ Solar Course Discounts
Ọ dịkwa mkpa ịmara na dị ka onye mbido anyanwụ na -eme ka ụfọdụ ndị ahịa gị na-ewu ụlọ ọhụrụ nke ọ nwere ike ọ gaghị ejikọ ya na njiri eletrik ịchọrọ ka ịgbazinye igwe na-ere ọkụ iji mee ka echichi ngwa ngwa. Enweghị obere igwe na - ere ọkụ, ị gaghị enwe ọkụ eletriki akụrụngwa, akụrụngwa na ngwa ọrụ ndị ọzọ. Dịka aghụghọ dị ka nke a nwere ike iyi ị nwere ike ịtụle isi ọwụwa nke ịwụnye ogwe anyanwụ na ala ihe na-enweghị ike. Ka anyị kwuo na ị na-agbagharị agagharị ma nwee batrị kwadoro. O yikarịghị ka ị ga-enwe ike batrị iji zuru ezu ịwụnye batrị na-enweghị nbugharị batrị ndabere maka ọrụ gị ka ị na-arụ ọrụ.
Nyocha nke Mbara Anyanwụ nke mbụ # 3: Inwe Di ma ọ bụ Onye nkuzi ma ọ bụ Ndị otu
Ọ bụ ezie na ikike ziri ezi dị mkpa ị ga-achọ otu iji ọrụ ndị a ma nyere gị aka ịchịkọta ihe ndị dị na mbara igwe. Can ga-eji anya gị hụ 6ft, 45 lb nke anyanwụ nke na-acha uhie uhie na-agbasa ubuo ụlọ n’elu gị naanị gị! Anyi n’eme ka nkwuputa anyi puta site na Nzoputa Mbara Anwu Ntughari ekwesiri iru oru abuo. May nwere ike chee na anyị na-eme ka anyị na-akpakọrịta, ma anyị na onye anyị na ya ga-eso bụ maka nchekwa na arụmọrụ gị. Otu ndi otu zụrụ onwe ha nke ọma dị ezigbo mkpa ka ọ bụrụ ezigbo onye na-eduzi anyanwụ. Zụ ndị ọrụ gị na-agba mbọ hụ na ịkwesighi imebi usoro niile nke ụzọ ahụ ma ọ bụ na ị ga-arụzigharị ọrụ na-adịghị mma n'ihi na ị nyere ibe gị otu nnwere onwe. Zọ kachasị mfe iji wepụ ọzụzụ a bụ ịdebanye aha ndị otu gị Larkwụ na larkwụ Solar nkuzi nrụnye nke nrụnye ma hapụ anyị nkọwa ndị ahụ.
Mmechi nke nyocha nke Anyanwụ
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ebe ndị a ka a ga-atụle mgbe ịmalite azụmahịa ntinye nke anyanwụ gị, nke a ga-abụ ihe obi mgbawa nke iji bulie ụlọ ọrụ nrụnye anwụ. Nke a mara mma kensinammuo na n'ụzọ kwụ ọtọ. Kwesịrị inwe ekwentị ka ị na-esi na saịtị ọrụ, akụrụngwa njem, ọrụ ndị ọzọ nye ndị otu egwuregwu wdg.
Otu Kimroy Bailey Foundation
Anyanwụ, ájá, oké osimiri na njigide Kimroy Bailey Foundation na-ahụ maka Jamaica na-emezigharị kpamkpam ebe mba anyị belata mbubata mmanụ ... GỤKWUO
Kimroy Bailey Robotics Robotics Summer Camp Kimroy Bailey Robotics na Mahadum Teknụzụ, Jamaica esorola na-ewepụta ndị… GỤKWUO
KB 100% Renewable Community Center
Ndi Kimroy Bailey Foundation kwuputara ebumnuche ya imebe Jamaica nke izizi 100% mmeghari ohuru na mpaghara ndi oru ugbo bu… GỤKWUO